OTU ESI AMỤTA ỊRỤ ỌRỤ NA KỌMPUTA - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ọtụtụ mgbe, mgbe m guzobere ma ọ bụ rụzie kọmputa maka ndị ahịa, ndị mmadụ na-ajụ m otú m ga esi esi na - arụ ọrụ na kọmpụta - nke klas kọmputa iji debanye aha, nke akwụkwọ ịzụta, wdg. N'ikwu eziokwu, enweghi m ike ịza ajụjụ a.
Enwere m ike igosi na ịkọwa eziokwu na usoro ịrụ ọrụ ụfọdụ na kọmputa, mana enweghị m ike "ịkụziri otu esi rụọ ọrụ na kọmpụta". Ọzọkwa, ndị ọrụ onwe ha anaghị ama ihe ha chọrọ ịmụta.
Kedu ka m si mụta ịrụ ọrụ na kọmputa?
Dị iche. Ọ bụ naanị ihe na-amasị m, na ihe otu onye ma ọ bụ ọzọ nke omume m bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya. Enwere m akwụkwọ akụkọ kọmputa na ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ (1997-98), gwara papa m ka o debe akwụkwọ na QBasic site na enyi ya, nke enyere na Delphi, ịmụta enyemaka zuru ezu (ezigbo, ezigbo Bekee), n'ihi nke a, emere m ka m nwee ike ịmepụta mkparịta ụka na ụlọ akwụkwọ Ngwa egwuregwu DirectX. Ee Emere m ya na oge m n'efu: Enwere m ihe ọ bụla metụtara kọmputa ma gbarie ya kpam kpam - m wee mụta ya. Ònye maara, ma eleghị anya, ọ bụrụ na m dị afọ iri na ise na ise ugbu a, m ga-ahọrọ ịnọdụ ala na Vkontakte na, karịa ihe m maara ma nwee ike ime ugbu a, m ga-ama banyere ihe niile dị na netwọk mmekọrịta.
Gụ ma gbalịa
Ihe ọ bụla ọ bụ, netwọk ugbu a bụ nnukwu ihe ọmụma banyere akụkụ nile nke ịrụ ọrụ na kọmputa, ọ bụrụ na otu ajụjụ bilitere, n'ọtụtụ ọnọdụ ọ bụ iji rịọ Google ma ọ bụ Yandex ma họrọ ntụziaka kachasị nghọta maka onwe ha. Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ ahụ amaghị ihe ajụjụ ya bụ. Ọ chọrọ ịmara ihe niile ma nwee ike. Mgbe ahụ i nwere ike ịgụ ihe niile.
Dịka ọmụmaatụ, akpọrọ m na-amasị m Idenye aha - Kọmputa Akwụkwọ edemede, njikọ nke ị nwere ike ịhụ na "ọnụọgụ" mgbochi n'aka nri. N'ịtụle ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị dere na ilekwasị anya na mbipụta nke ihe ọmụma na isiokwu nke nrụzi kọmputa, ntọala ha, iji mmemme, na-arụ ọrụ n'Intanet, na-edebanye aha na otu a ma na-agụchi ya anya nwere ike ịkụziri ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na onye na-agụ ya nwere mmasị na nke a.
Nke a abụghịkwa isi iyi. Ha internet zuru ezu.